Muddo ayaa la sugaa daryeelka caafimaad ee prostatacancer - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Nin laga qalayo cudurka prostatacancer. sawir: Ingvar Karmhed / SvD / TT
Muddo ayaa la sugaa daryeelka caafimaad ee prostatacancer
Howlaha dar-yeelka caafimaad ee prostatacancer
La cusbooneeyay måndag 21 augusti 2017 kl 11.46
La daabacay måndag 21 augusti 2017 kl 09.58
Tiro gaareeysa 10 000 oo rag ah ayaa sannad walba lagu sheegaa cudur kaankarada (prostatacancer) ee ku dhaca qanjir ragga ku yaala ee soo saara dheeceen ku milma minada ragga.
Hase yeeshee in kastoo ey goobaha caafimaadku isku dayeen sidii ey ku dhimi lahaayeen safka dar-yeelka caafimaad ee raggaasi muddo laba sannadood hortood ayuu weli sidiisii u dheer yahay safku.
Lars Krantz ayaa lagu sheegay tuhun cudurka inuu qabo , hase yeeshee uu bilooyin badan ku jiray safaf kala duwan ee goobaha dar-yeelka caafimaadka.
–Waxaa la ii diri lahaa raajo, si loo arko burada, middaasina oo qaadatay muddo dheer, bishii maarso ayaa iigu horreeysay oo wakhti aan ka helay raajada la is saaro. Ma wax la qaadan karaa bishii maasro? maarso! Oo waxaan sugaayay laga soo bilaabo bishii oktoobar ee sannadkii tagay, wax haba yaraatee dhacayna ma jirin. Kolka qofka lagu sheego cudurka kaankarada way adag tahay in aan laga fekerin, sida uu sheegay.
Si loo gaabiyo muddada safka loogu jiro dar-yeelka cudurka prostatacancer ayaa la dhigay qorshe sidii lagu gaari lahaa in aanay 60 maalmood ka badan safka sugitaanka ee lagu jiro.
Laba sannadood ayaa iminka laga joogaa kolkii la qoondeeyey sidii loo dhimi lahaa safafka loogu jiro dar-yeelka caafimaad ee cudurka, hase yeeshee ey safafku weli sidoodii u dhaadheer yihiin, sida ay sheegtay Ingela Frank Lissbrant, ahna dhakhtarad sare oo ka howl-gasha cusbitalka jaamicadda ee magaalada Göteborg.
–Safafka ey ku jiraan ragga qaba cudurka prostatacancer ayaan ahayn kuwo loo dul qaadan karo. Meelaha qaarkood ayaa muddadaa labada sannadood ah lagu guuleeystey in safka la soo yareeyo, hase yeeshee waa tallaabo si tartiib tartiib ah u socota. Aadna ayaana looga fog yahay goolkii la hiigsanayey, sida ay sheegtay.
"Liiska diiwaanka qaran ee prostatacancer" ayaa lagu keydiyaa dhammaan tira-koobyada cudurka la xiriira. Ingela Frank Lissbrant, ahna ku simaha madaxa diiwaankan oo eegis ku sameeysay ayay u muuqatay iney aad u yar yihiin ragga heley dar-yeel caafimaad lixdanka maalmood ee ugu horreeya, kolka cudurka lagu sheego.
–Inkasta oo laba sannadood ey ka soo wareegtey kolkii la go’aamiyey in wakhtiga hoos loo dhigo, ma helaan in ka badan 5-10% wakhtigii 60-ka maalmood ahaa ee la qoondeeyey dar-yeel caafimaad.
Waxay baahi ka jirtaa dhakhaatiir takhasus u leh iyo dhaqaalahaba, sida ay sheegtay.
–Waxaa loo baahan doonaa dhaqaale aad u fara badan. Waxaa nagu yar kalkaaliyeyaasha caafimaad iyo dhakhaatiirta noocyadooda kala duwan (urolog, onkolog, röntken iyo patalog), sida ay sheegtay Ingela Frank Lissbrant, ahna dhakhtarad sare oo ka howl-gasha cusbitalka jaamicadda ee magaalada Göteborg.